स्वास्थ्य पेज » कपालको सुरक्षाका लागि कस्तो प्राकृतिक उपचार गर्ने ? कपालको सुरक्षाका लागि कस्तो प्राकृतिक उपचार गर्ने ? – स्वास्थ्य पेज
कपालको सुरक्षाका लागि कस्तो प्राकृतिक उपचार गर्ने ?
कपालको उपचार पछिल्लो समय धेरैको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । सानो उमेरमा नै कपाल झरेर आधा टाउको खाली हुनु, कपाल पातलो हुनु, कपाल फुस्रो हुनु जस्ता समस्याहरु धेरैले भोग्ने साझा समस्याहरु हुन् । तर यसको उपचार कसरी गर्ने त ?
टाउकोको नियमित मसाज गर्नुले कपाल बाक्लो बनाउन मद्दत गर्छ । मसाज गर्दा तेल समेत राखेर मसाज गर्न सकिन्छ । प्रत्येक दिन टाउकोको मालिस गर्न सक्नुभयो भने यसले तपाईंलाई तनाव कम गर्न पनि मद्दत गर्ने गर्छ ।
कपाल झर्ने उपचारको लागि एलोवेरा लामो समयदेखि विश्वसनीय स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । यसले स्काल्प र कन्डिसन कपालहरूमा पनि सुख दिन्छ। यसले चायालाई हटाउन पनि मद्दत गर्छ । तपाईंले आफ्नो कपालमा हप्ताको केही पटक एलाबेरा जेल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
नरिवलको तेलमा हुने फ्याट्टी एसिडले कपाललाई नरम र बलियो बनाउन मद्दत थर्छ । नरिवलको तेल तपाईंको कपाल कस्तो छ भन्ने आधारमा नुहाउनुभन्दा पहिले वा पछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंको कपाल धेरै सुख्खा हुँदैन भने त्यसलाई नुहाउनुभन्दा केहीघण्टा अघि लगाएर नुहाउन सकिन्छ । यदि कपाल सुख्खा हुन्छ धेरैभने नुहाइसकेपछि यसलाई लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो कपालको चमक सुधार्नको लागि वर्षौं पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आइएको उपचार विधि हो ।
विभिस्कल पनि एक कपालको वृद्धि र मजबुतीको एउटा प्राकृतिक स्रोत हो । जसले पातलो कपाल भएका मानिसहरूमा कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ। यसमा एमिनोमार सी भन्ने तत्व हुन्छ । यो खनिज, भिटामिन लगायत पाउडरबाट बनेको हुन्छ। यी अवयवहरूले नयाँ कोषहरू पुनस् उत्पन्न गर्न मद्दत गर्छन् ।
ओमेगा फ्याट्टी एसिडको सेवनले तपाईंको कपाल भित्रबाट सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । किनकि ती पोषक र प्रोटिनले भरिएका हुन्छन् । ओमेगा सप्लिमेन्ट ट्रस्टेड स्रोतको साथ एन्टिअक्सिडेन्टहरू लिँदा यसले कपालको घनत्व र व्यास सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले कपाल झर्ने समस्यालाई पनि कम गर्छ। ओमेगा फ्याट्टी एसिडले तपाईंको कोषहरूलाई सही ढंगले काम गर्न मद्दत गर्छ र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि पनि मद्दत गर्छ ।